प्रदेश एक Archives - देश विकास डटकम
२५ असोज २०७६, शनिबार । सीता एयरको विमान ठूलो दुर्घटनाबाट जोगिएको छ । शनिबार बिहान ८ः३० बजे रामेछापको मन्थलीबाट सोलुखुम्बुको तेञ्जिङ हिलारी विमानस्थल लुक्लातर्फ उडेको उक्त ट्वीटअटर विमान दुर्घटनाबाट जोगिएको हो । नागरिक उड्डयन कार्यालय रामेछापका प्रमुख अमित कुमार चौरसियाका अनुसार विमानको इन्जिनभित्रै चरा पसेको थियो । उड्ने तयारीमा रहेको विमान धावनमार्गको करीब ७५ प्रतिशत
कुकुर मार्ने अभियान चलाएका खोटाङकाे दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयरविरुद्ध उजुरी
१७ भदौ २०७६, मंगलबार, खोटाङको दिक्तेलमा भुस्याहा कुकुर मार्ने अभियान चलाएको भन्दै स्थानीय मेयरविरुद्ध उजुरी परेको छ। दिक्तेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाका मेयर दीपनारायण रिजालविरुद्ध कारबाही माग गर्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालय खोटाङमा उजुरी परेको हो। केही दिन अघि उक्त नगरपालिका क्षेत्रमा निर्ममतापूर्वक कुकुर मारिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको थियो। मेयर रिजालले दिएको निर्देशनमा कुकुरलाई मार्ने
चार महिना भित्रै आउँदैछ नेपालमा रेल
काठमाडौं, २८ जेठ । आगामी चार महिनाभित्रै भारतको बथनाहाबाट विराटनगरसम्म रेल आउने भएको छ । भारतको रेल्वे विभागका इन्जिनियरिङ र निर्माण कम्पनीको टोलीले रेलमार्ग निर्माणको आइतबार अनुगमन गरेको छ । कान्तिपुरमा खबर छ । टोलीले निर्माण कम्पनीलाई रेलमार्ग निर्माणमा तीव्रता दिन निर्देशन दिए । भारत सरकारले मोरङको कटहरीसम्म ब्रोडगेज रेलमार्ग निर्माण गरिदिने नेपाल सरकारसँग भएको सम्झौताअनुसार
प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय प्रदेश नं. १, बिराटनगर आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को लागि प्रदेश सरकारको तर्फबाट प्रदेश प्रमुख डा गोविन्द तुम्बाहाङद्धारा प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम २०७५ जेष्ठ २७ गते माननीय सभामुख महोदय, १. जननिर्वाचित सर्वोच्च थलो संविधानसभाबाट २०७२ आश्विन ३ गते जारी भएको नेपालको संविधानबमोजिम संघीयताको कार्यन्वयनको क्रममा २०७४ मंसिर २१ गते
झापा, २३ वैशाख । नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं १ समितिको अध्यक्षमा विक्रम लुइँटेलसहित संयुक्त प्यानलका सबै उम्मेदवार विजयी भएका छन् । हिजाे सम्पन्न निर्वाचनमा लुइँटेलसहित संयुक्त प्यानलले जित हासिल गरेको हो । अध्यक्षका उम्मेदवार लुइँटेलले ९३१ मत प्राप्त गरेका छन् । त्यस्तै, उपाध्यक्षमा सोमनाथ सुसेली ९२३ मतका साथ विजयी भएका छन् । महिला उपाध्यक्षमा
स्कुल बस दुर्घटनामा ४० जना घाईते
झापा, १९ वैशाख । बाराको चुरीयामाइमा आज बुधबार बिहान विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा ४० जना विद्यार्थी घाइते भएका छन् । झापाबाट स्कुले विद्यार्थी बोकेर आएको मे १ ख २४२९ नम्बरको मकालु बसलाई ना ५ ख ३५८२ नम्बरको ट्रकले ठक्कर दिँदा बसमा रहेका विद्यार्थी र शिक्षक गरी ४० जना घाइते भएका जिल्ला प्रहरी कार्यालय मकवापनुरका
पेट्रोल र डिजेलको भाउ बढ्याे, पेट्रोल अब लिटरको १ सय ५ रुपैयाँ
काठमाडौं । नेपाल आयल निगमले पेट्रोल र डिजेलको भाउ समायोजन गरेको छ । नयाँ मूल्य अनुसार पेट्रोल र डिजेल प्रतिलिटरमा २/२ रुपैयाँ बढेको छ । अब पेट्रोल प्रतिलिटर १ सय ५ रुपैयाँ र डिजेल प्रतिलिटर ८५ रुपैयाँ कायम भएको छ । नेपाल आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य समायोजन भएसँगै नेपालमा पनि समायोजन गर्ने गरेको
३ नम्वर प्रदेशकाे मन्त्रीहरुकाे सेवा सुविधा निर्धारण
हेटौँडा । प्रदेश नं ३ को मन्त्रीहरुको सेवा सुविधाको विषयमा सैद्धान्तिक सहमति भएको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा भएको आजको बैठकले मन्त्रीहरुको सेवा सुविधाको सैद्धान्तिक सहमति र गाउँसभा र नगरसभा सञ्चालन कार्यविधि गरी जम्मा दुईवटा निर्णय गरेको छ । बैठकले प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गर्नका लागि
प्रदेश राजधानीमै तस्करीका सामान छ्यापछ्याप्ती
काठमाडौँ । प्रदेश ७ को राजधानी धनगढी बजारमा बेचिने अधिकांश भारतीय सामान भन्सार छलेर छिराउने गरेको पाइएको छ। बजारमा बेचिने कपडादेखि हार्डवेयरका ९० प्रतिशत सामान भन्सार छलेर नेपाल ल्याउने गरिएकोे छ। सुदूर पश्चिमका व्यापारी नाकामा पनि यस्तै अवस्था छ। कैलाली जिल्लाको एक सय एक किलोमिटर भारतसँग जोडिएको छ। ‘तयारी कपडा, थानको कपडा, मोटरपार्टस्, हार्डवेयर र